နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ် သတင်းတိုများ - SPORTS MYANMAR
နောက်ဆုံးရ အာဆင်နယ် သတင်းတိုများ
By Edi Tor September 18, 2018
* အာဆင်နယ် အသင်း နည်းပြ အူနိုင်း အမ်မရီဟာ သောကြာနေ့ မှာ ယှဉ်ပြိုင် ကစားမယ့် ယူရိုပါလိဂ် အုပ်စု ပွဲစဉ်ဖြစ်တဲ့ ဗော့ဆကာ အသင်း နဲ့ ပွဲမှာ ကွင်းလယ်လူ တော်ရီးယား ကို ပွဲထွက် အသုံးပြုဖွယ် ရှိတယ်လို့ Daily Mail က ဖော်ပြ လိုက်ပါတယ် ။ တော်ရီးယားဟာ အူနိုင်း အမ်မရီ လက်အောက်မှာ လူစားဝင် ကစားသမား အဖြစ် သာ ငါးပွဲ ဆက်တိုက် ကစားနေရတာပါ ။
ဒါ့အပြင် ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ ကမှ ခေါ်ယူ ထားတဲ့ ဂိုးသမား လီနို နဲ့ နောက်ခံလူ လက်ခ်ျစတိုင်နာ တို့လည်း ပွဲထွက် လာဖွယ် ရှိနေပါတယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်း အမှုဆောင် အရာရှိချုပ် ဂါဇီဒစ်ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းကနေ အေစီမီလန် အသင်းကို ပြောင်းရွှေ့ တော့မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဂါဇီဒစ် က ” လွန်ခဲ့တဲ့ ဆယ်နှစ်လုံးလုံး အာဆင်နယ်လို ကြီးကျယ်တဲ့ အသင်းကြီးမှာ အလုပ်လုပ် ခွင့်ရခဲ့ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်းက လမ်းစ အသစ် တစ်ခုကို လျှောက်လှမ်း နေပါပြီ ။ ကျွန်တော် လုပ်နိုင် သလောက် အားလုံး အားလုံး လုပ်ခဲ့ပါတယ် ။ ကျွန်တော့်ကို အားပေးတဲ့ ပရိသတ်တွေရော အကြာကြီး လက်တွဲခဲ့တဲ့ မိတ်ဆွေ တွေကိုကော ကျေးဇူးတင်ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်း က ကျွန်တော့် နှလုံးသား ထဲမှာ အမြဲ ရှိနေမှာပါ ။ ” လို့ ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်းကနေ ထွက်ခွာတော့ မယ့် ဂါဇီဒစ် ရဲ့ နေရာကို Raul Sanllehi နဲ့ Vinai Venkatesham ကို တာဝန် ပေးလိုက်တယ်လို့ သိရပါတယ် ။ Raul Sanllehi ဟာ အာဆင်နယ် အသင်း ဘောလုံးအကြီးအကဲ အဖြစ် တာဝန်ယူ သွားမှာ ဖြစ်ပြီး Vinai ကတော့ မန်နေဂျင်း ဒါရိုက်တာ အဖြစ် တာဝန် ယူသွား မှာပါ ။
* ယနေ့ စက်တင်ဘာလ ၁၈ ရက်နေ့ဟာ အာဆင်နယ် အသင်း ဂန္တဝင် နောက်ခံလူ ဆိုးလ်ကမ်းဘဲလ် ရဲ့ ၄၄ ပြည့် မွေးနေ့လည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ ဆိုးလ်ကမ်းဘဲလ် ဟာ အာဆင်နယ် အသင်းနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂ် ဖလား နှစ်ကြိမ် ၊ အက်ဖ်အေ ဖလား နှစ်ကြိမ် အောင်မြင်မှု ရယူနိုင် ခဲ့ပါတယ် ။ Happy Birthday Sol Campbell !!!
* အာဆင်နယ် ယူ-၂၃ အသင်းဟာ ဘလက်ဘန်း ယူ-၂၃ အသင်းနဲ့ ဂိုးမရှိ သရေကျ သွားပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်းဟာ နောက်ထပ် ပွဲစဉ် အဖြစ် လီဗာပူး ယူ-၂၃ အသင်း နဲ့ ယှဉ် ပြိုင် ကစားသွား ရမှာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။
* အာဆင်နယ် ယူ-၁၈ အသင်း နဲ့ ဆောက်သမ်တန် ယူ-၁၈ အသင်းတို့ ယှဉ်ပြိုင် ကစားခဲ့တဲ့ ပွဲမှာ အာဆင်နယ် ယူ-၁၈ အသင်းက တစ်ဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုင် ရရှိ သွားခဲ့ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် ယူ-၁၈ အသင်း အတွက် တစ်လုံးတည်းသော ဂိုးကိုတော့ ယခုနှစ် နွေရာသီ အပြောင်းအရွှေ့ မှာမှ ဆန်းဒါးလန်း အသင်း ကနေ ပြောင်းရွှေ့ လာတဲ့ ဆမ် ဂရင်းဝုဒ်က သွင်းယူ ပေးခဲ့တာပါ ။
* အာဆင်နယ် အသင်း ကွင်းလယ် ကစားသမား ဟောင်း ဝီလ်ရှိုင်းယား ဟာ ခြေကျင်းဝတ် ဒဏ်ရာ ကြောင့် ခြောက်ပတ် ခန့် အနားယူ ရတော့မှာလည်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အာဆင်နယ် အသင်း ပရိသတ် အချို့ ကတော့ တွစ်တာမှာ ဝီလ်ရှိုင်းယား ကြံ့ ခိုင်မှု ပြည့်ဝ နေဖို့ ဆိုတာ မဖြစ်နိုင်ဘူး လို့ စနောက် ရေးသား ထားကြပါတယ် ။
* အာဆင်နယ် အသင်း ကွင်းလယ်လူ အိုဇေးလ် ရဲ့ အေးဂျင့် ဖြစ်သူ ဒေါက်တာ အာဂတ်ဆိုဂတ်က အိုဇေးလ် တူရကီ သမ္မတ နဲ့ ဓါတ်ပုံ တွဲရိုက်တာဟာ လုံးဝ မမှားယွင်း ကြောင်း နဲ့ သမ္မတ က ဖိတ်ခေါ်လို့ လေးစား သမှု နဲ့ သွားရောက် တွေ့ဆုံ ခဲ့ခြင်းတာ ဖြစ်ကြောင်း ပြောကြား သွားခဲ့ပါတယ် ။
နောကျဆုံးရ အာဆငျနယျ သတငျးတိုမြား
* အာဆငျနယျ အသငျး နညျးပွ အူနိုငျး အမျမရီဟာ သောကွာနေ့ မှာ ယှဉျပွိုငျ ကစားမယျ့ ယူရိုပါလိဂျ အုပျစု ပှဲစဉျဖွဈတဲ့ ဗော့ဆကာ အသငျး နဲ့ ပှဲမှာ ကှငျးလယျလူ တျောရီးယား ကို ပှဲထှကျ အသုံးပွုဖှယျ ရှိတယျလို့ Daily Mail က ဖျောပွ လိုကျပါတယျ ။ တျောရီးယားဟာ အူနိုငျး အမျမရီ လကျအောကျမှာ လူစားဝငျ ကစားသမား အဖွဈ သာ ငါးပှဲ ဆကျတိုကျ ကစားနရေတာပါ ။
ဒါ့အပွငျ ယခုနှဈ နှရောသီ အပွောငျးအရှေ့ ကမှ ချေါယူ ထားတဲ့ ဂိုးသမား လီနို နဲ့ နောကျခံလူ လကျချြစတိုငျနာ တို့လညျး ပှဲထှကျ လာဖှယျ ရှိနပေါတယျ ။
* အာဆငျနယျ အသငျး အမှုဆောငျ အရာရှိခြုပျ ဂါဇီဒဈဟာ အာဆငျနယျ အသငျးကနေ အစေီမီလနျ အသငျးကို ပွောငျးရှေ့ တော့မှာလညျး ဖွဈပါတယျ ။ ဂါဇီဒဈ က ” လှနျခဲ့တဲ့ ဆယျနှဈလုံးလုံး အာဆငျနယျလို ကွီးကယျြတဲ့ အသငျးကွီးမှာ အလုပျလုပျ ခှငျ့ရခဲ့ပါတယျ ။ အာဆငျနယျ အသငျးက လမျးစ အသဈ တဈခုကို လြှောကျလှမျး နပေါပွီ ။ ကြှနျတျော လုပျနိုငျ သလောကျ အားလုံး အားလုံး လုပျခဲ့ပါတယျ ။ ကြှနျတေျာ့ကို အားပေးတဲ့ ပရိသတျတှရေော အကွာကွီး လကျတှဲခဲ့တဲ့ မိတျဆှေ တှကေိုကော ကြေးဇူးတငျပါတယျ ။ အာဆငျနယျ အသငျး က ကြှနျတေျာ့ နှလုံးသား ထဲမှာ အမွဲ ရှိနမှောပါ ။ ” လို့ ပွောကွား သှားခဲ့ပါတယျ ။
* အာဆငျနယျ အသငျးကနေ ထှကျခှာတော့ မယျ့ ဂါဇီဒဈ ရဲ့ နရောကို Raul Sanllehi နဲ့ Vinai Venkatesham ကို တာဝနျ ပေးလိုကျတယျလို့ သိရပါတယျ ။ Raul Sanllehi ဟာ အာဆငျနယျ အသငျး ဘောလုံးအကွီးအကဲ အဖွဈ တာဝနျယူ သှားမှာ ဖွဈပွီး Vinai ကတော့ မနျနဂေငျြး ဒါရိုကျတာ အဖွဈ တာဝနျ ယူသှား မှာပါ ။
* ယနေ့ စကျတငျဘာလ ၁၈ ရကျနဟေ့ာ အာဆငျနယျ အသငျး ဂန်တဝငျ နောကျခံလူ ဆိုးလျကမျးဘဲလျ ရဲ့ ၄၄ ပွညျ့ မှေးနလေ့ညျး ဖွဈပါတယျ ။ ဆိုးလျကမျးဘဲလျ ဟာ အာဆငျနယျ အသငျးနဲ့အတူ ပရီးမီးယားလိဂျ ဖလား နှဈကွိမျ ၊ အကျဖျအေ ဖလား နှဈကွိမျ အောငျမွငျမှု ရယူနိုငျ ခဲ့ပါတယျ ။ Happy Birthday Sol Campbell !!!
* အာဆငျနယျ ယူ-၂၃ အသငျးဟာ ဘလကျဘနျး ယူ-၂၃ အသငျးနဲ့ ဂိုးမရှိ သရကြေ သှားပါတယျ ။ အာဆငျနယျ အသငျးဟာ နောကျထပျ ပှဲစဉျ အဖွဈ လီဗာပူး ယူ-၂၃ အသငျး နဲ့ ယှဉျ ပွိုငျ ကစားသှား ရမှာလညျး ဖွဈပါတယျ ။
* အာဆငျနယျ ယူ-၁၈ အသငျး နဲ့ ဆောကျသမျတနျ ယူ-၁၈ အသငျးတို့ ယှဉျပွိုငျ ကစားခဲ့တဲ့ ပှဲမှာ အာဆငျနယျ ယူ-၁၈ အသငျးက တဈဂိုး ဂိုးမရှိနဲ့ အနိုငျ ရရှိ သှားခဲ့ပါတယျ ။ အာဆငျနယျ ယူ-၁၈ အသငျး အတှကျ တဈလုံးတညျးသော ဂိုးကိုတော့ ယခုနှဈ နှရောသီ အပွောငျးအရှေ့ မှာမှ ဆနျးဒါးလနျး အသငျး ကနေ ပွောငျးရှေ့ လာတဲ့ ဆမျ ဂရငျးဝုဒျက သှငျးယူ ပေးခဲ့တာပါ ။
* အာဆငျနယျ အသငျး ကှငျးလယျ ကစားသမား ဟောငျး ဝီလျရှိုငျးယား ဟာ ခွကေငျြးဝတျ ဒဏျရာ ကွောငျ့ ခွောကျပတျ ခနျ့ အနားယူ ရတော့မှာလညျး ဖွဈပါတယျ ။ အာဆငျနယျ အသငျး ပရိသတျ အခြို့ ကတော့ တှဈတာမှာ ဝီလျရှိုငျးယား ကွံ့ ခိုငျမှု ပွညျ့ဝ နဖေို့ ဆိုတာ မဖွဈနိုငျဘူး လို့ စနောကျ ရေးသား ထားကွပါတယျ ။
* အာဆငျနယျ အသငျး ကှငျးလယျလူ အိုဇေးလျ ရဲ့ အေးဂငျြ့ ဖွဈသူ ဒေါကျတာ အာဂတျဆိုဂတျက အိုဇေးလျ တူရကီ သမ်မတ နဲ့ ဓါတျပုံ တှဲရိုကျတာဟာ လုံးဝ မမှားယှငျး ကွောငျး နဲ့ သမ်မတ က ဖိတျချေါလို့ လေးစား သမှု နဲ့ သှားရောကျ တှဆေုံ့ ခဲ့ခွငျးတာ ဖွဈကွောငျး ပွောကွား သှားခဲ့ပါတယျ ။